टुसा उम्रेका गेडागुडीको झोल अर्थात् क्वाँटी किन खाइन्छ ? - The Public Today
टुसा उम्रेका गेडागुडीको झोल अर्थात् क्वाँटी किन खाइन्छ ?
१८ श्रावण २०७७, आईतवार २२:०७
साउन १८ गते : जनै पूर्णिमामा क्वाँटी खाने चलन पहिलेदेखि चलिआएको छ । क्वाँटी नौ थरी गेडागुडी मिसाएर तयार गरिन्छ, जसमा चना, मस्यांङ, मुगी, बोडी, मास, भटमास, सीमी, ठूलो केराउ, सानो केराउ पर्दछन । यसलाई ३ – ४ दिन पानीमा भिजाएर त्यसमा टुसा उम्रिएपछि त्यसलाई झोलिलो बनाएर पकाइन्छ र खाने गरिन्छ ।
यसलाई खाजा तथा नास्ताको रूपमा दिनहुँ काँचै खान पनि सकिन्छ । काँचै खाँदा असर गर्छ भने हल्का बफाएर खान सकिन्छ तर काँचै खाँदा यसबाट अधिक मात्रामा पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । जनैपूर्णिमाको दिनमा खाइने क्वाँटीले वर्षायाम भरी कामगर्दा भएको चिसो ठीक हुने, चर्मरोग ठीक हुने लगायतका विश्वास पनि छन् । तर क्वाँटीका फाइदाका बारेमा आधुनिक स्वास्थ्यविज्ञानले पनि वर्णन गरेको छ । स्वास्थ्यको हिसाबले क्वाँटी धेरै फाइदाजनक छ ।
क्वाटीका फाइदा यस्ता छन्
गेडागुडीहरुमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । प्रोटिन हाम्रो शरीरमा आवश्यक पदार्थ हो जसले रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने लगायतका धेरै काम गरिरहेको हुन्छ । टुसा उम्रिएको क्वाँटीमा फाइबर पाइन्छ । फाइबरले पाचन प्रणाली, मुटुरोग, मधुमेह, क्यान्सर र तौल घटाउन मद्दत पुराउँछ । क्वाँटीमा पाइने फाइबरले कब्जियत, पाइल्स आदि समस्याहरु हुनबाट बचाउँछ । क्वाँटीलाई हाम्रो शरीरले सजिलै पचाउन सक्छ, त्यसैले अपाच्य हुने समस्या हुँदैन।
क्वाँटीबाट भिटामिन बी, सी, इ, क्याल्सियम, फोस्फोरस लगायतका खनिज पदार्थहरु हाम्रो शरीरले यथेस्ट मात्रामा पाइन्छ । भर्खरै अपरेसन गरेका तथा अन्य ठोस खाना खान नहुने विरामीहरुलाई क्वाँटीको झोल खुवाउन सकिन्छ जसमा आवश्यक पोषक तत्वहरु ठिक मात्रामा पाइन्छ । झाडापखाला लागेको बेला हाम्रो शरीरबाट पानी खेर जाने हुनाले त्यसको पूर्ति गर्नको निम्ती बालबालिकालाई क्वाँटीको झोल खुवाउन सकिन्छ ।
प्रोटिनको कमीबाट बालबालिकामा हुने कुपोषणमा क्वाँटी खुवाएमा त्यसबाट चाँडो रोग निको हुन मद्दत गर्छ । सस्तो र घरमै तयार गर्न सकिने हुनाले यसलाई अन्य खानेकुराको तुलनामा सन्तुलित आहारको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तो बहूउपयोगी क्वाँटी जनैपूर्णिमामा मात्र नभई अरुबेलामा पनि खाने गर्नाले शरीरलाई चाहिने सन्तुलित भोजनको महत्वपूर्ण अंश बन्न सक्छ । क्यानाडा नेपाल